एजेन्सी, पुर्व पोर्नस्टार तथा बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनि पछिल्लो केहि समयदेखि आफ्नो बोल्ड तस्विर सामाजिक संजालमा सेयर गरेर चर्चामा आएकी छिन्। मानिसहरुले उनको तस्विरमा फरक-फरक कमेन्ट गरेको देख्न सकिन्छ। यो पटक पनि एक तस्वीरलाई लिएर सन्नीको ट्रोल बनेको छ। सन्नीले आफ्नो इंस्टाग्राम एकाउन्टमार्फत एक तस्विर सार्वजनिक गरेकी छिन्। जसमा सन्नीलाई चिया बनाईरहेको देख्न सकिन्छ। तर सन्नीको चिया बनाउने तरिका भने अलि फरक देखिन्छ।
सन्नीले पिङ्क कलरको सानो किट्लीलाई एउटा लठ्ठीको सहारामा झुन्ड्याएकी छिन्। सन्नीले त्यसै किट्लीको तल लाइटर बालेकी छिन्। यस तस्विरमा सन्नीले क्याप्सन लेखेकी छिन्, ‘कृपया लाइटरले मात्र चिया नबनाउनुहोस। यसले काम गर्दैन। मैले ट्राइ गरे तर फेल भयो।’ सन्नीको यस्तो स्टाटससहितको फोटो देखेर कतिले राम्रो प्रतिक्रिया दिए भने कत्तिले नराम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनको चिया बनाउन लागेको यो तस्विर यतिबेला सामाजिक संजालमा भाइरल बनिरहेको छ।
प्रकाशित : मङ्गलबार, फागुन २९, २०७४१२:५१
सपनाको संसार भन्दा कम छैन मनिषा कोइरालाको घर, हेर्नुहोस तस्विरमा!
चलचित्र ‘गुनगुन’ मा चन्दा दाहालको हट आइटम डान्स [भिडियो]
जाह्नवीले बाबु र बहिनीको साथ आमा श्रीदेवीको अवार्ड लिदा भावुक भए कपुर परिवार!
रेखाको ‘मालिका’ को दोस्रो गितमा जाजरकोटकी कमलाको यस्तो अवतार! (भिडियो)
किन खोज्दैछीन् नायिका रेखा थापाले गाँउमा गएर बालकलाकार ? (पुरा जान्नुहोस्)
१३ सेकेन्ड अगाडि पत्रपत्रिका